I-Fashion Show: Ian Poulter's Outfits Wild
I-On-Course Khangela kwi-Poulter's Adventurous Early Golf Fashions
I-Poulter yayisepinki xa iphumelele isiganeko sakhe sokuqala sePGA Tour ngo-2010 WGC Accenture Match Play Championship. Stuart Franklin / Getty Izithombe
U-Ian Poulter uyakuthanda iifashthi. Uninzi kangangokuba unenkampani yakhe yokwakha izambatho - Ian Poulter Design. IWebhsayithi ye-IJP ichaza injongo kaPoulter njengokudala "umgangatho ophezulu, oyingqayizivele, onobunqabileyo kunye obunqamlekileyo owenza usebenze ngokufashisa."
"Funky" kwaye "hlukile" ngamagama amabini aqhelekileyo asetyenziswa ukuchaza iimpahla zegalufu zePoulter. "Ukhohlisayo," "isiqwenga" kunye ne "goofy" ngamanye amagama ngamanye amaxesha asetyenziswa. Ngokukodwa kwi-Poulter kwiminyaka yokuqala kwimigodi yegalufu, xa wayehlala egqoke ukuze ahlonishwe.
Kodwa kuzo zonke i-detractor, kukho ezinye iifom zengubo zikaPoulter. Yaye njengabo bonke abafowuni, uPoulter unobungozi bakhe kwaye uyaphoswa. Uza kubona imimiselo yamabini kumaphepha alandelayo.
Ngokwephephandaba laseBrithani Unina ka- Independent , unina kaPoulter wayengumphathi weDorothy Perkins, umgca weefeshini zeentombi. IWebhsayithi Yakhe ithi, "U-Ian unomdla wokugqoka waqala esemncinci kwaye wakondla lo mnqweno wayesebenza kwi-Stevenage market and marketing."
Kuyafaneleka ukuba u-Ian Poulter agqoke yonke i-pink (ngasentla) kwi-Championship ye-2010 ye-WGC Accenture Match Play Championship. I-Pink isoloko ibe yimibala yefashion eyintandokazi. Kwaye wagqiba umdlalo "kwi-pinki" ngokuphumelela kwakhe kokuqala kweWGC kunye nomqhubi wokuqala we-USPGA Tour.
Ijubane leJack Union kunye neengubo ze-tartan .... Hmmmm. Stuart Franklin / Getty Izithombe
I-Poulter idibanise i-Union Jack isambatho kunye neebhulukhwe ze-tartan ngo-2009 eBritish Open. Oku nje akusebenzi kum. Ndiyathanda ijaji ngokwalo, kwaye iigantshi zilungile ngokwabo, nazo. Konke kuluhlu. Emva koko, andinayo inkampani yam yokwakha, kwaye u-Ian wenzayo, ngoko ke ngubani ohleka ngokugqibela?
Harry How / Getty Izithombe
Ezi bhulukwe zenziwe kwi-fabric Poulter zathatha i-tabletop kwi-pizzeria ayithandayo.
U-Poulter wagqoka oku apha e-US Open ngo-2008.
Andrew Redington / Getty Izithombe
I-Poulter yayisimo sengqondo ebomvu kwii-2007 zeDunhill, ukuya ngasezicathulweni zakhe.
05 ka 23
Iluhlaza kunye nePenki
Ndiyathanda indlela ezo zicathulo zeepinki ezikhazimulayo zihlanjululwa ngayo ngeebhulukhwe ze-tartan. Emva koko, u-Ian ukhangeleka ukuba ugqoke izicathulo ze-bubble-gum. I-Poulter yayidlala le ngubo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nepinki kwiBritish Masters ngo-2007. Yonke into ayibonakali inamandla njengamalungu.
URichard Heathcote / Getty Izithombe
Thanda izicathulo ezibomvu nezimhlophe. Bazama. Iingubo zandikhumbuza uhambo oluya kwi-monolith kunye nendawo yonke ngo- 2001: I-Space Odyssey . Unokudinga uncedo lweekhemikhali - njengaye, uthi, enye yalabo bahambayo kwi-clubhouse-ukuyixabisa kakuhle.
07 ka 23
U-Ian Poulter kwi-Opening yaseScotland ngo-2007. Ngaba izicathulo ezimnyama zibonakala zingekho ndawo? U-Ian udlala ngokukhawuleza umdlalo wokuba ukhaba umnyama omnyama ubonakala ungavamile.
08 ka 23
I-Poults yayinzima ukuyilahleka kwi-fairways yase-Oakmont Country Club kule ngubo, eyayiyigqobile ngexesha lojikelezo lwesibini kwi-2007 US Open. Kungenzeka ukuba abamnyama nabaphuzi baxhamla kwiqela lebhola lebhola lebhola lasePittsburgh Steelers. Okanye mhlawumbi ugqithise kwi-bumblebees.
IWarren Little / Getty Izithombe
U-Argh, unomphathi omncinane kuye. Izitayela zePoulter kwibala phambi ko-2006 iDunhill Links Championship.
Vuliwe okanye i-Shut?
Ukuba ukugqoka iClaret Jug kwakulungile, kwaye ukugqoka i-Union Jack kwakulungile, xa kwakunokubethwa ntoni kubo bobabini ngexesha elifanayo? Eyoyikisayo , yintoni! I-Poulter yadibanisa ezimbini kwiintandokazi zakhe ezindala kule ndawo kwi-British Open 2006.
'Umbuzo' -Ukwazi ukwenza isigqibo?
Stuart Franklin / Getty Izithombe
Xa abanye bebuza umbuzo wakho, ngelixa ungayifaki uphawu lombuzo? Ukuba u-Ian Poulter, u-cheeky. Kwaye umbuzo umbuzo emlenzeni wakhe wawungcono kunokuba "wtf?" bekuya kuba ngo-2006 eBritish Open.
Hayi, akusiyo isimboli se-dioxygen kwi-shirt ye-Ian Poulter. Kulungile, eneneni - kodwa nayo ibonakaliso yomthengisi wefowuni yaseBrithani, umxhasi weqela lebhola lebhola le-Arsenal. U-Ian Poulter ungumdlali omkhulu weArsenal. Enyanisweni, ugqoke ijezi yeArsenal kwisithombe esingentla, esathathwa ku-Abu Dhabi ngowama-2006. (Lezi jerse zishiye umhlalaphantsi, ekubeni i-O2 ayisasekho i-Arsenal shirt).
Inyulo yaseYurophu ivimbela ukugqweliswa kweebhola zebhola emva kokuba umdlali waseMal Madrid ahambe yonke uZinedine Zidane ePoulter kamva kwinqanaba. Kulungile, ndenze ukuba iZidane iqhekeke, kodwa ayikho inxaxheba malunga neebhola zebhola ebusweni njengoko ivalwe yi-Euro Tour.
Kwam, le ngubo inehlobo lwee-1970s-I-Studio-54 ijonge kuyo. U-Ian wayenokugqiba ukujonga ngokuvula amaqhosha ambalwa aphezulu kunye nokufaka ezinye iintambo zegolide entanyeni yakhe. Yintoni ekhomba kuyo? Isidima sakhe, esiphila ngakwesokunene sakhe. Uxolo u-Ian, kodwa ndinomntwana kuba ndiyakhathalela!
Ndithi leli phepha "Ingxaki Yobunzima" kuba i-Poulter ibonakala ihlonela iintetho zaseTshayina - kunye nama-silk azo aseTshayina kunye nobugcisa bekheram. (Ewe, njengento enjalo, ndiyabukela iAntiques Roadshow .) Esi sambatho sagqithwa kwii- Champions HSBC zakwa -2005.
Yiyiphi loo nto emlenzeni wePoulter? NguClaret Jug, iqela eliwunikezelwe ngumdlali weBritish Open. I-Poulter yaqulunqa lo mhlaba kwi-2005 Open Championship. Kwaye kwakhokelela u-Seve Ballesteros, kwisibhengezo sokusasaza, ukukhawulela ukuba le "yayikufutshane kakhulu (i-Poulter) iya kufikelela" kwiClaret Jug. Kodwa i-Seve ingathi ngolunye usuku kufuneka ithathe i-back back. Kwaye siyaqiniseka ukuba uPoulter wathatha le mabhulu!
Ngama-Masters ka-2005, u-Ian Poulter wayegqoke isantya se-orange kunye nomgca we-orange phantsi kweengxathu zakhe kunye nomgca we-orange ngaphantsi kweengubo zakhe. Iingubo zisebenza kum, kodwa ndinexesha elinzima nezihlangu.
17 we 23
Nguwuphi uhlobo lomxholo othi "Ingubo"? Yiluhlobo lomxholo oluhamba nale ngubo engu-Ian Poulter. Oko kubonakala kunene. Oko kubonakala kunqabileyo ukuthetha, kunikezelwa ukuba ininzi yegalufa ekutyekeleni oku kuvuka kuya kuba kuhle kakhulu. Kodwa imibala ephumayo yenza ukuba ibonakale i-Poulter encinci. Nantoni na oyibiza ngayo, ndiyathanda. Ndiyathanda kakhulu, ukusuka entloko ukuya enzwaneni. Ndandinxiba oku. Aphumelelanga. Kodwa ndiyakunxiba.
U-Ian Poulter waya esikolweni esidala-isikolo esikhulileyo, iGene Sarazen esikolweni esidala-ngexesha le-Contest 3 kwi-Masters ngo-2005. Emva koko wabuyela emsebenzini wakhe wesibili njengomphathi we-Augusta National grillroom.
Leyonto ayiyona ihembe laseHawaii u-Ian Poulter ogqoke ngo-2005 u- Sony Open , kodwa ngaba loo nto ingaba iingubo zaseHawaii? Zibuze le nto, u-Ian: Ngaba iDuffy Waldorf wayenokugqoka oku? Ukuba impendulo nguwe ewe, yiphinde uyibuyisele kwikhamera yakho. Ulungile kakhulu kule nto.
I nkwenkwezi kunye ne zithintelo
URoss Kinnaird / Getty Izithombe
Wayegqoke ibhulukhwe esekelwe kwi-Union Jack kwi-Open Open, ngoko kutheni kungabikho ibhulukwe esekelwe kwiflegi yaseMerika kwiintambo kumhlaba waseMerika? I-Poulter yaxhathisa le nkwenkwezi kunye neentambo ze-Stripes ngaphandle kwe-USPGA Championship ngo-2004.
UDonald Miralle / Getty Izithombe
Uyabona ntoni kule mibhotile yokuhlola iRorschach? Ndibona uBobby Jones edla nachos. Oko kungikhumbuzayo: Ndiyathanda kakhulu i-nachos! (Eneneni, enye yoshicilelo lweentyatyambo ezenziwe nguPoulter ngexesha le- Sony Open eHawaii.)
Umoya we-Poulter wawubonakala unobunzima kwaye ulahleke kwiintsuku zokuqala zakhe zokugqoka. Olu luvavanyo kunye ne-ezine-ezine lubonakala lufana ne-minus-two. I-pinki, nangona kunjalo, iya kuba ngumbala obalaseleyo kwi-closet yePoulter.
23 we 23
U-Ian Poulter wayenamanqaku amaninzi kwiNdwendwe yaseYurophu ngo-2004, kodwa engazange adlale kakhulu eMelika kwaye wayengakabi ngumdlali owaziwayo emhlabeni jikelele. Emva koko wenza enye yeyona ndlela yokuqala imfashini enkulu, egqoke izibhulu ze-Union Jack-ephefumlelweyo ngo-2004 eBritish Open. Emva koko, wonke umntu wayesazi i-Ian Poulter.
Iingcaphuno zeBen Hogan: Iimfundiso ezigqithiseleyo kunye NeGolfer
UJuli Inkster: I-Bio yeHolo yeGalofu yeNzara
I-Tiger Woods yafumana njani isidlaliso sakhe? Ngaba Unayo Nabanye?
Ziyintoni i-Tiger Woods 'Endorsements?
Isiphuzo sikaJohn Daly: Iirepele kunye Nokuba kutheni iKhocktail ibizwa ngokuba yiGolfer
I-Hogan's Walkway: Kwindlela phakathi kwamaTe
Yintoni i-Tiger Real Wood (kwaye epheleleyo) Igama?
Iintsuku ezili-8 ezidakaleleyo eMelika
Ukuchaneka Xoxa kwiMormon ne-Gays, Icandelo 3
Indlela yokudibanisa "Uthabatha" (ukufakela)
I-Top Ten Oldies ka-1976
Inombolo yesixhenxe yaseJapan
Indlela Yokugwema Iingcamango Eziqhelekileyo eziphambili
Indlela yokuguqula kwi-Islam
'Du coup': I-Adverb yesiFrentshi engabonakaliyo okuthethi nto ayikho nto
I-Coleman Slide: Ukumisa nokuLawula imiyalelo
Ngoobani iLilanga ZikaThixo noThixokazikazi?
"Izwe leSiqhwa": Isikhokelo soFundo
Iposi: Iingcaciso kunye nemizekelo yobuxoki
Ukusebenzisa iiJapan ze-"Wa" kunye ne "Ga" ngokuchanekileyo
Ukwahlukana 'okunje' kunye 'Ngoko' kuLwimi lwe-ESL lwabaFundi
Ngaba Ngaba Ukuziphatha Kokuziphatha Kokuziphatha Kokuziphatha Kokuziphatha Kokuziphatha Okungekho Mzimba?
Umgangatho we-ACT Ukuthelekiswa kokungeniswa kwiikholeji zase-Iowa
Indlela yokungena kwezopolitiko
Izizathu ezi-8 Kutheni ukuphendula kweMichiza kubalulekile
Yintoni Isicwangciso soMgangatho?
Yintoni Amandla Omoya? I-Pros and Conserve yalo Mthombo wamandla
Iiminyaniso ZeBhayibhile Ngobuhlobo